Bilayska Gaalkacyo oo qabtay nin sitey walxo qarxa - Sabahionline.com
Bilayska Gaalkacyo oo qabtay nin sitey walxo qarxa Abriil 26, 2012
Bilayska Gaalkacyo ayaa subixii Arbacada (25-ka April) ahaa gacanta ku dhigey nin sitey aalad qaraxda oo aad u tiro badan, Garowe Online-ta Soomaaliya ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Maxkamad Puntland ku taal oo 12 xubnood oo al-Shabaab ah ku xukuntay dil
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo ku sii siqaya Kismaayo
4 ku dhimatay dagaal dhex-maray al-Shabaab iyo ciidamada Soomaaliya
Ninka oo aan la aqoonsan ayaa lagu qabtay meel u dhaw Dugsiga Sare ee Cumar Samatar iyo xarunta dawladda hoose ee Gaalkacyo, sida uu sheegay Taliyaha Bilayska Mudug, Gaashaanle Sare Jaamac Maxamed Axmed. Ninku wuxuu ka yimi koofurta Soomaaliya, laakiin Axmed wuxuu ka gaabsaday in looga shakiyey in uu yahay xubin ka tirsan al-Shabaab, sababta oo ah baaritaanka oo haatan jooga qaybtiisii billowga ahayd. Axmed wuxuu dadka degaanka ah ku boorriyey in wixii dhaqdhaqaaq ah oo ay ka shakiyaan ay u soo sheegaan bilayska, oo iyagu lug ku gaafwareega Gaalkacyo si ay hoos ugu dhigaan xaddiga dembiyada ee magaalada ka dhaca. Muxuu kula yahay qoraalkan?